‘शहरमा बिरामी पठाउने कर्णालीले अब डाक्टर पठाउनेछ’ – Newssarokar
न्यूज सरोकार । ७ श्रावण २०७८, बिहीबार १३:४९
कर्णाली प्रदेशको जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (कास) स्थापना भएको १० वर्षपछि यो वर्ष एमबीबीएस पढाइ शुरू हुँदैछ । अब देशको सबैभन्दा दुर्गम क्षेत्र कर्णालीका बासिन्दाले आफ्नै ठाउँमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउनेछन् ।
‘हामीले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेर चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्र पठाइसकेका थियौं, कोरोना संक्रमण नभएको भए हाम्रो कार्यकालमै सम्बन्धन प्राप्त हुन्थ्यो’ पूर्व रजिष्ट्रार काफ्लेले भने ।
जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग ३०० शय्याको अत्याधुनिक शिक्षण अस्पताल छ र यसमा १०० भन्दा ज्यादा डाक्टर कार्यरत छन् । तीन विधामा विशेषज्ञ डाक्टर उत्पादन भइरहेका छन् भने भर्खरै मात्र चिकित्सा आयोगले २० सिट एमबीबीएस पठनपाठनको अनुमति दिएको छ ।
भण्डारीले तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरे । यो विधेयक १५ चैत २०६७ मा रायका लागि स्वास्थ्य तथा शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइयो । उनका अनुसार विधेयक दर्ता भएको दुई वर्षसम्म अघि बढेन ।
‘कर्णालीमा चिकित्सक टिक्दैनन्’ भन्दै भ्रम फैलाउनेलाई उनको जवाफ छ, ‘विशेषज्ञको रूपमा म ६ वर्ष टिकें, अरू चिकित्सक पनि टिकिरहेका छन् ।’ ११ वर्षदेखि निरन्तर कर्णालीको दुर्गम भेगमा स्वास्थ्य शिविर चलाउँदै आएका डा. रावल कर्णालीको स्वास्थ्य सेवाको स्तर उकास्ने बाहेक आफ्नो दोस्रो स्वार्थ नरहेको बताउँछन् । सरकारी सेवाबाट नाम निकालेर राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा आठौं तहमा पोस्टिङ भएका उनी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि कर्णाली आएका थिए ।
‘यही ठाउँमा जन्मे–हुर्केको र यही शुरूआती चरणदेखि काम गरेको हिसाबले मैले कासको हावापानी धेरै बुझेको छु र यहाँ धेरै गर्न सक्छु भनेर नै उपकुलपतिको लागि आवेदन दिएको थिएँ’, उनी भन्छन् । कर्णालीका जिल्लामा अबको चार वर्षमा विशेषज्ञ चिकित्सक पुर्‍याउने प्रतिष्ठानको मुख्य उद्देश्य छ । एमबीबीएसको सिट विस्तारै बढाउँदै लैजाने बताउने डा. रावल एमडी र एमएसको अरू फ्याकल्टी थप्ने योजना सुनाउँछन् । पीएचडी कोर्समा पनि गृहकार्य गरिरहेका उनी भन्छन्, ‘यो क्षेत्रको स्वास्थ्य र शिक्षाको स्तर सुधारेर नमूना संस्था बनाउने छौं ।’
कोरोनाबाट बच्न पत्रकार महासंघको अपिल
७ श्रावण २०७८, बिहीबार १३:४९
नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा जुम्ला कोरोना संक्रमणबाट बच्न अपिल गरेको छ । विरुद्धको अभियानमा सक्रिय देखिएको छ । जुम्लामा रहेर विभिन्न मिडिया संग आवद्ध पत्रकार तथा सञ्चारगृहलाई पटक पटक स्वास्थ्य सामाग्री दिएर सुरक्षित पुर्वक रिपोटिङ गर्न सुझाव दिदै आएको छ । नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्न आग्रह गर्दै […]
२६ बैशाख २०७८, आईतवार १९:२९
२४ आश्विन २०७८, आईतवार १८:१७
शिक्षा प्रेमी नेता लक्ष्मण शाही
२ भाद्र २०७८, बुधबार ०७:१४
कृषि बिकाश कार्यलय जुम्लाले ३३ लाखा बरावरको कृषि औजार वितरण